Nelson • Body Rub sy NuRu Massage
Ny tanànan'i Nelson dia sisin-tany andrefana sy atsimo andrefana dia ny Distrikan'ny Distrikan'i Tasman ary ny avaratra-atsinanana, atsinanana ary atsimo atsinanana dia misy ny Filan-kevitry ny Distrikan'i Marlborough. Ny tanàna dia tsy ahitana an'i Richmond, ilay tanàna faharoa lehibe indrindra. Nelson City dia misy mponina manodidina ny 50,000, ka izy no tanàna faha-12 be mponina indrindra any Nouvelle-Zélande. Raha atambatra amin'ny tanànan'ny Richmond, izay misy mponina manodidina ny 15,000, ny fihaonambe iray manontolo dia laharana faha-9 amin'ny tanàna lehibe indrindra any Nouvelle-Zélande araka ny isan'ny mponina.
Sandam-bola Dolara NZ